Ukuzilawula abaxhasi - anatod
WEB / APP ABAKHULU
Abathengi bakho baya kufumana i-web / app 100% eguqulelwe kwiifowuni zorhafowuni, apho zikwazi ukulawula i-akhawunti yakho, khangela i-akhawunti yakho yangoku, yenza iintlawulo ze-intanethi, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
I-Web design 100% iphendula
Ukungena kwi-system yomthengi. Idibeneyo ne-Facebook.
Ikhasi laseKhaya Imoji ye-akhawunti yangoku, isimo seenkonzo, ukukhangisa okwenziwa ngumntu kwenkampani.
Ulwazi lwexesha langempela
Abaxhasi bakho baya kukwazi ukulawula iqoqo kunye neenvoyisi ezenziwe.
Baya kuba nako ukuyikhuphela xa befuna.
I-ISP ngayinye iyakwazi ukwenza ngokwezifiso ukuba zininzi iimvoyisi kunye nabaqokeleli abathengi banokuzibona kunye neentlobo zeenvoyisi ezizobonisa.
Ulawulo lwe-100% kwi-intanethi
Ngaba wenze iikopi ngokutshintshwa kwebhanki kwaye abathengi kufuneka bathumele ubungqina bentlawulo nge-imeyili? Ingaba umthengi uneengxaki zokubhengeza intlawulo kwaye kufuneka ukuba athumele ubungqina balo?
Ngokukhethwa kobungqina bentlawulo akukho mfuneko kumthengi ngamnye ukuthumela i-imeyile. Ngokufaka olu khetho, abathengi banokulayisha ifayile yePaul okanye bathathe ifoto yevawutsha kwaye uyilayishe kwinkqubo. Emva koko umqhubi uyavuma okanye uyalahla intlawulo kwaye umthengi uyaziswa ngokuzenzekelayo.
Zonke iifayile ezithunyelwe kumxhasi ziya kugcinwa kwisiseko sedatha.
Inkxaso & Ukufakwa
Umthengi ngamnye unokuhlaziya amathikithi enkxaso yezobugcisa ezenziwe.
Yonke inkcazelo efunekayo iboniswe, umthengi uya kubona kuphela itekiti yedatha efunwa yinkampani yakho.
Kwakhona, kubaxumi abakhethiweyo, baya kukwazi ukudala ithikithi yenkxaso ngokuthe ngqo kwi-system-self-management system okanye bavule kwakhona ithikithi yokuxhaswa yokugqibela ukuba umthengi akakaneliseki ngokuphela kwayo.